ह्वात्तै बढ्यो कर्मचारीको तलब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि,हेर्नुहोस् कति पुग्यो? – Paluwa Khabar
ह्वात्तै बढ्यो कर्मचारीको तलब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि,हेर्नुहोस् कति पुग्यो?
साउन ६, २०७८ बुधबार 102
आज देखि सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको तलब यति धेरको दरले बडने/ काठमाडौं। आजबाट मासिक २ हजार रुपैयाँले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ।
यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार वृद्धि गर्ने बजेटमा प्रस्तुत गरेको थियो। यससँगै आजबाट सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको बताएका थिए।
सुझाबमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।
अनुचित कार्यलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गर्न, ठेक्का प्रणालीमा सुधार गर्न उनले सुझाब दिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण समेत भ्रष्टाचार बढेकाले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आयोगले सुझाब दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को वार्षिक प्रतिवेदन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो । आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
Prevएसईई रिजल्ट प्रकाशित , यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
Nextफेरि आयो अत्यन्तै दु’ खद खबर- ३५ नेपालीले नि’ धन
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवासंग गोप्य बार्ता गरेपछि प्रचण्डले गरे यस्तो दावी
बिश्वको अनौठो मन्दिर जँाहा मागेको कुरा २४ घण्टा भित्र पुरा हुन्छ, जानिराखौँ यिँ ३ कुरा
भर्खरै कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरिने मिति घोषणा — राष्ट्रिय बोर्ड…
नेपाल प्रहरीलाई ठुलो स’फलता, आफ्नै साथीले ग’रेका रहेछन भा’गर’थी भ’ट्टको ह’त्या र ब’ला’त्का’र
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (300)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (217)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (197)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (177)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (170)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (167)
के साउन १५ गतेदेखि पुन नि’ षेधाज्ञा हुन्छ ? यस्तो छ सम्भावना, भर्खरै आयो यस्तो जानकारी (161)
१.	शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (197)
२.	आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (170)
३.	अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (167)
४.	के साउन १५ गतेदेखि पुन नि’ षेधाज्ञा हुन्छ ? यस्तो छ सम्भावना, भर्खरै आयो यस्तो जानकारी (161)
५.	पैसाका लागि साथीको ह’ त्या म’ दिरा खुवाएर रातभरी घुमाए, बिहानै गो’ ली हानेर मा’ रे (157)
७.	माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (146)
८.	मन्त्रीका लागि माधव नेपालले पठाए ६ जनाको नाम , को-को बन्नेभए मन्त्री ?(हेर्नुस् नामसहित (136)